Ny ekipa WHO sy AHA dia miara-miasa amin'i Google Fit sy ny vaovao farany | Androidsis
Ilaina ny fanaovana fanatanjahan-tena ankehitriny mba hitazomana ny fahasalamana. Ary bebe kokoa rehefa misy aho dia tsy fantatro hoe firy ny fitaovana izay mahatonga antsika hanjary tsy hipetraka. ny ny fanavaozana ny Google Fit vaovao dia miaraka amin'ny hevitra fanovana ny fampiharana hanomezana endrika azy io ary amin'ny alàlan'ny fanoloranao masonao.
Avy amin'ny bilaogin'i Google izay nanambarana ny fahatongavanà fanavaozana vaovao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa izay efa natolotry ny fampiharana G Fitness lehibe. Amin'ny tenin'izy ireo manokana, Google dia niara-niasa ny American Heart Association (AHA) ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) hahatakatra ny siansa ao ambadiky ny fampihetseham-batana ary hanampy antsika hahazo ny habetsaky ny hery ilaina hanatsarana ny fahasalamantsika.
1 Fanavaozana vaovao mifandraika amin'ny tanjona vaovao roa: "Minitra-pitondrana" ary "Points Heart"
2 Dia an-tongotra 30 minitra isan'andro hahatratrarana ny soso-kevitry ny WHO
Fanavaozana vaovao mifandraika amin'ny tanjona vaovao roa: "Minitra-pitondrana" ary "Points Heart"
Google dia mila amin'i Fit, toy ny amin'ny Fitbit, que manatsara ny fahasalamanao ary ho an'ity, tamin'ity fanavaozana ity, dia nifantoka tamin'ny tanjona roa tsotra izy: "Minitra hetsika" sy "Toro-hevitra". Ireo teboka roa ireo dia mifototra amin'ny tolo-kevitry ny hetsika AHA sy WHO ho an'ny tena fiatraikany amin'ny mpampiasa Fit.
Ny ezahina dia manampy amin'ny fanentanana sy hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa mba hanatsarantsika rehetra ny fahasalamantsika amin'ny fiainana nomerika izay mahatonga antsika hijanona tsy hitoetra; lazao amin'ireo mpilalao na andian-tantara mitohy ao amin'ny Netflix. Izany no antony anoloran'ny Google hevitra fa hanatsarana ny fahasalamantsika dia ilaina ny mifindra bebe kokoa ary hipetraka kely.
Ho an'ity dia misy ny «Minitra vitsy an'ny hetsika» izay tsy maintsy mandresy amin'ny hetsika samihafa isika ary manentana ny tenantsika amin'ny fiovana kely amin'ny fahasalamana mandritra ny andro, toy ny fiakarana fa tsy ny ascenseur. Ny fitsangatsanganana antoandro dia iray amin'ireo hetsika izay afaka manova ny fomba fiainantsika isan'andro sy manatsara ny toe-batantsika.
Miara-miasa tanteraka amin'ireo "Heart Points" izay ananantsika manomeza voninahitra ny tsirairay amin'ireo hetsika ireo vita. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hahazo isa iray isaky ny minitra fanaovana hetsika antonony na maivana ianao. Isa ho enti-mitondra ny alika amin'ny fihodinana na teboka roa raha toa ka efa mihazakazaka isika (raha efa miaraka amintsika ny alika, dia tsara kokoa!).
Dia an-tongotra 30 minitra isan'andro hahatratrarana ny soso-kevitry ny WHO
Raha afaka mandeha mandritra izany isika 30 minitra dimy andro isan-kerinandro, ho azontsika atao ny mamoaka ny vola atolotry ireo andrim-panjakana roa malaza ireo. Amin'izany dia hampihena ny risika amin'ny aretim-po, hanatsara ny torimasantsika ary hampitombo ny fahasalamantsika ara-tsaina.
Google dia niditra tao amin'ny Google Fit the fahaizana mamantatra ho azy ireo hetsika rehetra ireo mampiasa ny sensor ho an'ny telefaona na ny fiambenana, toy ny accelerometer sy GPS. Amin'ireto sensor ireto no anaovanao tombana akaiky ny isan'ny isa amin'ny fo azo.
Ary tsy ho afaka hamantatra fanazaran-tena mahazatra toy ny hazakazaka na bisikileta ihany ianao, fa izany dia mahay manisa azy amin'ny hetsika toy ny pilates, push-ups na ny asa an-tokotany (eny, manao fanatanjahan-tena koa ianao).
Raha ampy ny antony manosika anao, aorian'ireo fialantsasatra fahavaratra izay nandalovanay teo amin'ireo bara amoron-dranomasina sy ireo gilasy ihany koa afaka mampiasa rindranasa hafa ianao toa an'i Strava, Runkeeper na Endomondo hampifangaro azy ireo amin'ny Google Fit. Ho hitanao eo amin'ny efijery findainao ny hetsika rehetra, ny zava-bita ary ny fivoaran'ny tanjona amin'ireo fampiharana rehetra ireo, ka tsy misy fialan-tsiny hanovana ny tonony ara-batana.
La ny fanavaozana ny Google Fit vaovao dia miaraka amin'ny hevitra hoe manova ny fiainanao mipetrapetraka ianao ary manomboka mampihetsika ny vatanao hanatsara ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny. Lohahevitra izay tsy tokony hilalaovantsika mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Nohavaozina tanteraka ny Google Fit mba hamporisihana anao hanatsara ny endrika ara-batana sy ny fahasalamanao